Toa misosa sy mahazatra fotsiny ny mitaingina fiarakodia.
Amin'ny ankapobeny dia misy kodiarana 4 ny fiarakodia iray, izay iny no mampifandray ilay fiara sy ny tany.
Raha jerena anefa iny kodiarana iny, dia tsy izy iray manontolo miodidina no mitehina sy mikasika amin'ny tany, fa ampahany kely amin'ny velarany fotsiny ihany, ka rehefa miodina ny kodiarana dia mifandimby mikasoka amin'ny tany fotsiny ilay velaran'ny kodiarana.
Raha atambatra ny velaran'ireo kodiarana 4 mikasika amin'ny tany, dia mitovy amin'ny velaran'ny felatanana roa, ka ny felatanana iray dia mitovy amin'ny velaran'ireo kodiarana eo aloha mikasika amin'ny tany, ary felatanana faharoa kosa ny kodiarana roa aoriana.
Izany hoe, ny fiara milanja, 2 taonina eo, raha fiara madinika, dia mitombona amin'ny felatanana roa amin'ny tany, voizina handeha hatrany ammin'ny 120 -200km/h amin'ny alalan'ilay felatanana roa, ary ajanona tsy hikorisa amin'ilay felatanana roa raha tiana hijanona, rehefa manindry hisatra amin'ny fiara.
Endrika toy izany ny zava-misy eny amin'ny Antenimieram-pirenena.
Araka ny andininy faha-75 voalaza ao amin’ny Lalàmpanorenana, dia mivory indroa isan-taona ny Antenimieram-pirenena, ka ny fivoriana faharoa amin’izany dia ny Talata fahatelo amin’ny volana oktobra, fivoriana izay natao indrindra handinihana ny Teti-bolam-panjakana ho amin’ny taona manaraka.
Nanomboka ny 20 oktobra 2020 ny fivoriana ara-potoana faharoa ny Antenimieram-pirenena.
Hatreto anefa ny 13 novambra dia mbola tsy eny am-pelatanan'ireo Solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana ny taona 2021, izay ny Governemanta no tokony hanolotra mialoha izany.
Mbola mandalo ihany koa amin'ny Loholona moa io tolo-dalàna io.
vendredi, 13 novembre 2020 11:27
Alliance Voahary Gasy : Hiatrika fivoriambe fanao isan-taona
Hiatrika ny fivoriambe fanao isan-taona ny vovonam-pirenena ivondronan’ireo mpisehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana (Alliance Voahary Gasy na AVG) eto Madagasikara anio zoma 13 novambra tontolo andro.
Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe iray ao Tsaralalana, izay tsy lavitry ny lapan'ny tanànan'Analakely, no hanatanterahana izany.
Ny fahatsapana fa tsy mety ny mitazam-potsiny manoloana ny fandringanana mihoapampana ny ala sy ny zavamaniry ary ireo biby tsy manampaharoa noho ny savoritaky ny taona 2009 no nahatonga ireo Malagasy mpisehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ho nifanatona haingana ka nanangana ny AVG.
Feno 11 taona ny nijoroan’ity firaisamonim-pirenena, izay sarotiny dia sarotiny tokoa amin’ny fiarovana sy ny fitantanana ny harena voajanahary eto Madagasikara ity.
Nankalaza ny faha-10 taona nisiany izy nanomboka tamin’ny taon-dasa, ary nitohy tamin’ity taona 2020 efa madiva hivalona ity.
vendredi, 13 novembre 2020 11:16
Bevovotany-Isandra : Avotra ilay takalon'aina, dahalo iray maty voatifitra
Avotry ny miaramilan'ny ZRPS ALPHA 2, ny 7 novambra teo, tao Bevovotany Distrikan'Isandra, ny tovovavy iray nataon'ny dahalo takalon'aina.
Lavo nandritra ny fifandonana tamin'ireo miaramila kosa ilay dahalo.
vendredi, 13 novembre 2020 11:14
Herisetra atao amin'ny maha lahy na maha vavy : Hentitra ny sazy
Asa an-terivozona imasom-bahoaka mba ho fananarana.
Haseho ny fiarahamonina ireo mpanao herisetra ara-pananahana, na ireo mpanolana, sy ireo mpanao herisetra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (Violences basées sur le genre – VBG).
Hafainganina ho isan-kerinandro ny fitsarana ireo raharaha momba ny VBG.
Nisongadina ireo omaly nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo teny amin'ny birao fiasany eny Faravohitra.
vendredi, 13 novembre 2020 11:13
13 novembre: Journée mondiale de la vasectomie.
Elle est pratiquée sous anesthésie locale dans le bureau du médecin et dure environ 10 minutes.